AirTags: Dhammaan tabaha, dejinta iyo dejinta | Wararka IPhone
Miguel Hernández | 11/05/2021 18:00 | Qalabka IPhone, iPhone
El AirTag Apple waa qalab abuuray xoogaa xiise badan oo ka dhex jira guud ahaan isticmaalayaasha tikniyoolajiyadda. Daacad noqon mayno, Apple wax alifay AirTags ah maleh, waxay samaysay wixii ugu wanaagsan ee ay samayso: Soo qaado badeecad jirta una bedesho tan ugu fiican suuqa.
Waxaan dib u eegi doonnaa AirTags oo waxaan kuu sheegi doonaa khiyaamada ugu fiican, yutiilitida iyo dejimaha aad heli doontid. qalabkan gaarka ah. Sida had iyo jeer, Actualidad iPhone waxaan rabnaa inaan kaa caawinno inaad sida ugu badan uga faa'iidaysato alaabadaada Apple.
Sida had iyo jeer ah, saaxiibkeen Luis Padilla wuxuu si toos ah u shaashadeeyay oo uu u falanqeeyay AirTag si toos ah kanaalkayaga YouTube-ka, sidaa darteed haddii aadan weli arkin, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad soo booqato kanaalkeenna oo aad iska qorto si aad nooga caawiso inaan sii wadno koritaanka.
1 Sidee ayuu u shaqeeyaa Apple AirTag?
2 Sida loo dejiyo AirTag
3 AirTag ee barnaamijka raadinta
4 Sida loo isticmaalo AirTag
Sidee ayuu u shaqeeyaa Apple AirTag?
AirTag waa badeecad dhexroorkeedu yahay 3,19 cm oo wejiga hore leh caag cad iyo dhabarka birta birta ah ee birta ah. Waa wadar ahaan 0,8 cm qaro weyn oo wadarta miisaanka, oo ay ku jiraan batteriga, waa 11 garaam Si aad ugu adeegto sidii qalab raadinta ah AirTag Waxay leedahay dhowr tiknoolajiyad awood yar oo wireless ah isla aaladdaas.
Baaxadda: 100 mitir iyadoo la adeegsanayo Bluetooth LE 2,4 GHz
U1 Chip oo leh Ultra Wide Band
Waxaan ku bilaabaynaa Bluetooth LE (Tamar hoose) taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku xirmaan aalad kasta oo Apple ah oo la jaan qaadi karta codsiga baaritaanka sida iPhone, iPad ama MacBook-keena. Faa'iido ahaan, AirTag ma takoorto milkiilayaasha, taasi waa, waxay si otomaatig ah ugu xirtaa qalab kasta oo Apple ah. Thanks to tiknoolajiyada 'Bluetooth LE', AirTag-yadaani waxay kula xiriiraan aaladaha iyagoo adeegsanaya aqoonsiyo sir ah oo 128-bit ah, sidaa darteed aragtida asturnaanta ayaa si buuxda loo damaanad qaaday, wax caan ku ah alaabooyinka shirkadda Cupertino
Sida loo dejiyo AirTag
Waxaan si toos ah ula xiriiri doonnaa xiriirka ugu horeeya si aan uga saarno "xirmada" AirTag sidaasna shaqada ugu deg. Marka tan la dhammeeyo waxaan u dhaqaaqi karnaa inaan jiidanno caagga yar ee caagga ah, tani waxay iska ilaalinaysaa xiriirka ka dhexeeya batteriga iyo aaladda si aysan saameyn ugu yeelan madax-bannaanida. Qalabka ayaa si otomaatig ah loo hawlgelin doonaa isla marka aan ka saarno filimka caagga ah, Waan ogaan doonnaa tan maxaa yeelay waxay soo saari doontaa dhawaaq xaqiijin ah iyada oo loo marayo ku hadlaheeda dhammaystiran ee isku dhafan. Hadda waa waqtigii aad ugu sii degi lahayd meheradda dejinta.
Waxay noqon doontaa mid ku filan in la keeno iPhone-keena ku dhow AirTag waana lagu ogaan doonaa iyada oo la adeegsanayo isku darka u dhexeeya Bluetooth iyo NFC. Waxay muujin doontaa inaan haysanno AirTag si aan u qaabeyno sida ay ugu dhacdo AirPods waxaanna kala dooran karnaa laba beddel:
Soon: Waxaan ka dooran doonnaa liis taxane ah oo hawlo ah oo aan ku siin karno AirTag oo nidaamka ayaa mas'uul ka noqon doona u xilsaaridda magac iyo astaan.
Caadadii: Xaaladdan oo kale waa inaan u xil saarnaa magac, emoji si loo aqoonsado iyo wax kale oo yar.
Laga bilaabo waqtigan xaadirka ah AirTag wuxuu ku xirnaan doonaa aqoonsikeena Apple si joogto ah, Si loo baabi'iyo waa inaan tagnaa qalabka aaladda Apple ID oo aan gacanta ku qabanno. Tani dib uma cusbooneysiineyso xitaa haddii aan bateriga ka qaadno, markaa dibedda looguma "qaabeyn karo".
AirTag ee barnaamijka raadinta
Qalabkayaga AirTag wuxuu si toos ah uga muuqan doonaa arjiga Raadinta, xuddunta nidaamkan goobta u gaarka ah. IYOWaa muhiim inaan haysanno nooca 14.5 ee iOS ama iPadOS oo lagu rakibay si loo arko tabka cusub Waxyaabaha taas oo dhammaan AirTagskeennu u muuqan doonaan si habsami leh. Kaliya markaa waan awoodi doonnaa inaan la macaamilno iyaga, markaa waa waqtigii lagu cusboonaysiin lahaa kiiska fog ee aanad wali samayn.
Hada hadaan riixno the AirTag oo aan dooneyno inaan si gaar ah u aragno, menu cusub oo xulashooyin ah ayaa soo muuqan doona, laakiin marka hore waxaan diiradda saari doonnaa kuwa muuqda:
Kudar shay cusub: Haddii ay dhacdo in AirTag-keena uusan si otomaatig ah u muuqan markii aan u dhowaanno innagoo isticmaaleyna NFC, waxaan isticmaali karnaa shaqadan. Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale noo oggolaaneysaa inaanu qaabeyno "makiinadaha raadinta" kale ee haysta liisanka MFi ama la jaan qaadi kara.
Aqoonso sheyga la helay: Haddii aan aad ugu dhow nahay AirTag, midkeenna ama shisheeyaheenna, waxaan gujin karnaa "caddee shayga la helay", si aan ugu caddeynno cidda iska leh shirkaddaas 'AirTag', faahfaahinta xiriirka ama wixii macluumaad ah ee khuseeya.
Sida loo isticmaalo AirTag
Haddii aan gujino AirTag arjiga raadinta, isla markiiba wuxuu na tusayaa meesha uu ku yaal khariidada. Si kastaba ha noqotee, waxaan haynaa awoodo kale oo aan jabin doonno iyadoo ku saleysan badhanka ka muuqda shaashadda:
Daar dhawaaqa: Haddii aynaan caddeyn meesha ay ku taal AirTag, riixitaanka badhan ayaa ka faa'iideysan doona af hayeenka 'AirTag' ee ku dhex jira wuxuuna soo saarayaa dhawaq cad, oo ku filan si loo helo.
Raadi: Haddii aan riixno batoonkan, nidaamka caanka ah ee nagu toosin doona tooska AirTag waa la awoodsiin doonaa. Xaqiiqdu waxay tahay inay u shaqeyso xoogaa si aan macquul ahayn, waxay lumisaa isku xirnaanta si fudud waxayna shaqeysaa oo keliya haddii aan runtii u dhoweyno AirTag.
Habka lumay: Hawshani waxay noo oggolaan doontaa inaan u digno aaladaha dhow in AirTag iyaga u dhow uu "lumay". Sidan oo kale, waxay awoodi doonaan inay ku arkaan macluumaadka xiriirkeena shaashadooda markay ogaadaan. Tani waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah howlaha ugu habboon ee dhammaan guryahayaga AirTag.
Jiheeyaha: Haddii aad laba-gujisid astaanta hagista ee ka hooseysa «i» shaashadda raadinta, waxay sameyn doontaa cabbir ka dhigeysa noo oggolaaneysa inaan si sax ah u aqoonsanno jihada ay AirTag wajaheyso.
Intaas waxaa sii dheer, miiskan waxaan ku arki doonnaa qeybta bidix ee kore qadarka batteriga uu ka tagay AirTag. Batariga wuxuu socon doonaa qiyaastii hal sano waana heer caadi ah oo nooca qalabka ah. Si la mid ah salka hoose waxaan awood u yeelan doonnaa inaan magaca u bixinno 'AirTag' ama u tirtirno si joogto ah.
Tani waa waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ka ogaato AirTag-kaaga cusub, si aad sida ugu badan uga faa'iideysato sheygan gaarka ah ee Apple ee aad ka iibsan karto 35 euro bogagga internetka sida Amazon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » AirTags: Dhammaan tabaha, dejinta iyo dejinta
Waa inaan sugnaa illaa 2023 si aan u aragno modemkii ugu horreeyay ee 5G oo ay naqshadeysay shirkadda Apple